5-ta December Maanta Oo Kale Maxaa Dunida Soo Maray? Qormo Taariikheed Xiiso Badan Oo Taxane Ah | FooreNews
Home Aragtida Dadweynaha 5-ta December Maanta Oo Kale Maxaa Dunida Soo Maray? Qormo Taariikheed Xiiso Badan Oo Taxane Ah
5-ta December Maanta Oo Kale Maxaa Dunida Soo Maray? Qormo Taariikheed Xiiso Badan Oo Taxane Ah
FoorenewsDec 05, 2015Aragtida Dadweynaha, Barnaamijo, wararka0
5-tii December 1242, maanta oo kale waxa dawladdii Cabbaasiyiinta madax ka noqday Abu Axmed Cabdalla Muctasim
5-tii December 1931, maanta oo kale waxa ay ahayd maalintii dhulka lala simay ee la dumiyey kaniisaddii weynayd ee Masiixiyiinta ee ku taallay magaalada Moscow. Waxa ay ahayd kaniisaddii Jesus Candaria. Waxaana sidaa sameeyey oo amarka lagu burburiyey keenay Josef Stalin.
5-tii December 1936, maanta oo kale waa maalintii ay Midawga Soofiyeeti si rasmi ah uga mid noqdeen Jamhuuriyadaha Armenia, Azerbaijan, Georgia iyo Kyrkistan.
5-tii December 1952 maanta oo kale waa maalintii qorshaha dil loo gaystay aasaasihii Ururka Itixaad Al Caam ee dalka Tuuniisiya Farxaan Shaxaad kaasi oo ku baxay gacanta koox argagixiso ah oo lagu magacaabo Gacantii Casayd.
5-tii December 1957, maanta oo kale waxa dunida soo maray dhacdadii la wada yaqaanay ee ahayd go’aankii Madaxweynihii hore ee wadanka Indonesia Axmed Sukarno uu amarka ku bixiyey in dhammaan dadka ak soo jeeda dhalasho ahaan wadanka Holland ay dalkaasi Indonesia isaga baxaan sida ugu dhakhso badan.
5-tii December 1962-kii maanta oo kale waa maalintii wadanka Maraykanka iyo Midawga Soofiyeeti ay ku heshiisyeen in hawada sare si nabad qab ah oo aan dhibaato lahayn looga wada sameeyo cilmibaadhisyo ama loo diro dayax-gacmeedyo. Waxa ay labadan dal maalintaasi kala saxeexdeen in isticmaalka hawada sare loo adeegsado hawlo nabad gelyo iyo cilmiyeed ee aanay labada dale e Maraykanka iyo Midawga Soofiyeeti wax cunfi ah ka samayn isticmaalka hawada sare iyo dayax-gacmeedyada.
5-tii December 1967, maanta oo kale waxa ay dalka Vietnam iyo adduunkaba xasuusinaysaa xasuuqii ka dhacay wadankaasi Vietnam ee loo yaqaanao Xasuuqii Dac Sun.
5-tii December 1977, maanta oo kale dalalka Suuriya, Liibiya, Ciraaq, Algeria, iyo Jabhadda Xoraynta reer Falastiin waxa ay cilaaqaadkii diblomaasiyeed hal maalin oo kali ah u wada jareen wadanka Masar.
5-tii December 1978, maanta oo kale Midawga Soofiyeeti iyo Afghanistan waxa ay kala saxeexdeen heshiis dhinaca iskaashiga ah oo saaxiibtinimo. Waxaanu heshiiskaasi ahaa kii suurta galiyey in Midawga Soofiyeeti markii dambe ku soo duulo waddanka Afghanistan oo uu qabsado balse dagaalo ba’an kadib Ruushka laga saaray dalkaasi Afghanistan.
5-tii December 1984 maanta oo kale waxa ay ahayd maalintii ay diyaaradda Boeing 747 kooxo argagixiso ahi afduubeen, diyaaraddaasi ay lahayd shirkadda diyaaradaha ee dalka Kuwait waxa loo afduubay dhinacaa iyo wadanka Iiraan.
5-tii December 1989, dalka Ciraaq waxa uu tijaabiyey gantaalkii ugu horreeyey ee dal carbeed yeesho ee ka gudbi kara xawaare dhan 2000 oo km. Waxa ay maalintaasi ciidamada Ciraaq saldhigoodii Anbaar ka rideen oo tijaabiyeen Gantaal Ruushku farsameeyey oo ka koobnaa saddex dabaq oo dherer ahaan wax ka duqayn karayey in ka badan 2000 oo km.
5-tii December 1996, maanta oo kale Madaxweynihii wadanka Maraykanka ee wakhtigaasi Bill Clinton waxa uu wakiilkii dalkiisa ee qaramada midoobay u fadhiday waa habartii Medline Albright u magacaabay Wasiirkiisa Khaarajiga, taasi oo noqotay haweenaydii ugu horraysay ee dalka Maraykanka ka noqota Wasiir Arrimo Dibadeed.
5-tii December 2005 maanta oo kale waxa harada Tanganyika ee dalka Congo DRC ku dhuftay dhul gariir khasaare badan keenay.
5-tii December 2014, sannadkii hore maanta oo kale waxa ay wakaaladda Cirka ee Maraykanku NASA shaacisay in ay ku guulaysatay in ay cirka sare u dirto dayax-gacmeedka Aroyon.
Previous PostShirkad Telefishanka Qaranka Deyn Lacageed Uga Goosatay Agab Muhiim U Ahaa Baahimaha Tooska Ah Next Post10-ka Nin Ee Adduunka Ugu Dheer Wakhtigan Iyo Dalalka Ay U Dhasheen